Inkasta oo labaduba ka mid ah qaabab kuwaas la mid yihiin mid ka mid kale oo jira, iyaga oo ay leeyihiin kala duwan oo saamayn ay farsamaynta iyo sidoo kale user-saaxiibtimo. Iyadoo labada nooc waa duubo files video, mid ka mid ah oo kaliya waa run ahaantii si fiican qabsaday loo maqli audio iyo sidoo kale tayada video ah, dayactirka sawirada xal sare ee speed.AVCHD sare soo saari kartaa cajaladaha Blu-Ray iyo mp4 la mid ah laakiin aan samayn karo foomka koobi jilicsan ee faylka. Labada leeyihiin tabar iyo xoogga, iyo haddii ay u istaagaan soo baxay mid ka mid dhinac, mana ay sameeyaan in kale. Ha noo eegno ay la barbardhigo toos ah iyo go'aan ka nafteena.
Qeybta 1: AVCHD vs MP4, Faraqa u dhexeeya AVCHD iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo AVCHD
Developer Soosaaray iskaashi wadajir ah oo u dhexeeya Sony oo Panasonic, qaab a si gaar ah loogu isticmaalo kaamirada tayo qeexitaanka sare, in si kale loo dhigo xeeldheeraha video duubo. Soo diyaariyay simayo hay'adda Muhaajiriinta Caalamiga ah (ISO), files in la joojiyo oo la .MP4 loo sameeyay in ay noqon socon kara kala duwan ciyaartoyda warbaahinta iyo sidoo kale qalabka warbaahinta. Noocan ah file kordhin taageeri doonaa xad ciyaartoyda oo dhan warbaahinta, xitaa kuwa caadiga ah.
Taariikhda Advanced Video sireed Qeexid High ama AVCHD markii ugu horeysay lagu soo bandhigay dunida ka mid ah loo maqli qeexitaanka sare iyo duubo digital sanadkii 2006 soo galay, waxaana ku xiga Sony sii daayo hore ee macaamiisha fiidiyo AVCHD 2007 Panasonic xigsadey ay la version of fiidiyo xirfadeed ee sannadkii 2008. Si kastaba ha ahaatee, waxaa waxay ahayd oo kaliya sanadkii 2011 ilaa fiidiyo macaamiisha waxaa laga sameeyey in ay la tacaalaan 1080-line 50-jir / s oo 60-jir ah / s qaabab (AVCHD Progressive) iyo stereoscopic video (3D AVCHD). Hab cusub waxa uu yimid iyadoo khasaare ah; u baahan heerka laba jeer xogta ee lagu daydo hore. Inkasta oo ay jiraan video xal fiican laga heli karaa maalmahan, oo dhan waxaa ka mid ah ma suurto ah ee AVCHD. Iyadoo qayb ka ah qaab ISO ayaa warbaahinta saldhig file, MP4 ama MPEG-4 (U soo guurista Picture Expert Group-4) waxay ku salaysan tahay si toos ah uga Qaabka File QuickTime. Kordhin file MP4 la sameeyey si ay u taageeraan Descriptors UJEEDDO horudhac ah oo ay la socdaan hawlaha kale ee MPEG. Qaab file MP4 markii ugu horaysay la sii daayay sanadkii 1999, waxaana uu tan iyo markii uu la wanaajiyey iyo la casriyeeyay dhawr jeer ilaa ay dib-u-sii daayo 2003, sixitaanka ay version final sidoo kale version in uu hadda ku jiraa isticmaalaan qaybo badan oo adduunka ah. Mid ka mid ah horumar weyn ku files MP4 waa wanaajiyey xawaaraha loading qaybsama. Haddii la ilaaliyo, files MP4 la meel kasta heli karaa.
Caanka In la eego tayada video loo maqli karo, AVCHD aad uga fiican yahay in oo u Qoraynaa karaa videos ee qaraarka 1080p 60 loox kasta labaad. AVCHD waa loo jecel yahay taageerayaasha of videos tayo sare leh. Marka si kastaba ha ahaatee kaydinta, videos ka AVCHD yahay kaliya ku haboon Blu-Ray cajalladaha iyo sidoo kale daawashada on HDTV, halka MP4 kartaa badbaadiyey sida hal file video ah oo ka dibna waxaa laga heli karaa meel kasta, xitaa iyada oo telefoonka gacanta.
Durdurrada Data Audio, video iyo amarro iyo sidoo kale durdurrada Cinwaan ee AVCHD waa multiplexed iyo kaydiyaa sida file a binary iyada oo durdur soo gaadiidka MPEG. Kaararka Memory iyo HDDs ee AVCHD shaqaaleeyaan isticmaalka nidaamka file .FAT halka UDF loo isticmaalo cajalladaha indhaha. Sida caadiga ah AVCHD record kaamirada la isticmaalayo nidaamka riixo Dolby Digital ah ee files audio. Waxa kale oo ay taageertaa rikoodh iyo multichannel audio. Heerka xogta audio noqon kartaa meel u dhaxaysa 64 k / gelinno in 640 k / jajabkii hadhay. In la eego wax ku ool ah loo isticmaalo, sidoo kale dad xirfad ama macaamiisha, heerka taariikhda u dhexeeya 256 k / jajabka iyo 384 k / jajabka ayaa lagu duubay. Macluumaadka lagu kaydiyo faylasha MP4 iyada oo durdurrada ee gaarka loo leeyahay iyo macluumaadka geeyo caadi gubay galay track gaar ah si gooni gooni ah, waxaa ka mid ahaa. Codecs socon qaab this waxaa loo gudbin karaa website maamulka diiwaangelinta MP4, halkaas oo aad ka heli kartaa liiska socon in ay isticmaalaan ciyaartoyda warbaahinta iyo qalabka. Codecs loo isticmaalo si ay u taageeraan durdurrada xog dheeraad ah MPEG-4 qaybaha 10 iyo 2, sireed Advanced Audio iyo Audio sameecadda ah iyo sidoo kale MPEG-4 lagu tiriyaa Text ujeedooyin ee subtitles soo saara.
Metadata Xogta A sharraxaya hantida gaar ah, metadata sharxayaa faahfaahin ku saabsan qoraaga iyo codsiyada in la isticmaalayn. Nasiib darro metadata aan la heli karin in AVCHD ama AVCHD files lite. Haddii aan si habboon loo hayo ilaa waqti, faylasha aad waayi kartaa wakhtiga ula socoto ah ee wax lagu qoro, taas oo dhacda sida bandhigay ee AVCHD awoodin in ay muujiyaan waqtiga. Metadata waa xogta sharaxa oo dhisme ah in sharxi kara tiro ka mid ah faahfaahinta xogta laftiisa, sida sida xogta la abuuray, waxa ujeedooyinka macluumaadka ku jira oo ay la socdaan macluumaad ku saabsan abuuraha ama qoraaga xogta. Info Tani waxaa lagu hayaa loona maamulaa database ah ee xogta, loo yaqaan diiwaanka metadata ama bakhaar metadata. Waa ay fududahay in la akhriyo metadata marka ay timaado qaab document qoraalka.
Faa'iido 1 - yaabka leh live-sawiro.
2 - Isticmaalka Dolby Digital AC-3 codec audio fpr tayada codka sare.
3 - qoraan karaa ilaa 1920x1080 / 60i, 50Oo waanan (16: 9). xal fudud
4 - socon u Blu-ray qaab Disc®. Awood Better kaydinta u files kala duwan oo badan - 1.
2 - badbaadi karaa sida file hal filim loogu talagalay si fudud u helaan.
3 - Faylal ay u fudud in aad nuqul, u guuraan iyo uploaded inay shabaqa.
Qasaarooyinka 1 - Isticmaalka MPEG-2 System (file .M2TS kordhin) ee lagu badbaadinayo, mid dhib badan si loo badbaadiyo in mid ka mid file hal.
2 - baahan yahay in la isticmaalo qalabka warbaahinta duubo qaarkood sida Hard Disk ama Memory Stick® warbaahinta.
3 - size file dhigmin (100 MB ee AVCHD waa MB 25 oo kaliya ee nooc kale file). 1 - xalka ugu sarreeya, waayo, MP4 waa 1440x1080 / 30p (16: 9).
. 2 - channel Audio waa kaliya laga heli karaa 2 channels / 48 kHz (frequency raystay)
3 - Isticmaalka MPEG-4 AAC LC codec audio, taas oo ah adayga hooseeyo codec.
U isticmaala in ay Sida ay magaceeda soo jeedisay, AVCHD waxaa inta badan ay isticmaalaan dadka qiimaynaya kartaa sawiro qeexid cad oo sare. Dadka raba in uu badbaadiyo ilaa kharashyada ay ka mid yihiin isticmaalka deegaanka kaydinta dooran lahaa qoro iyada oo MP4. Inkastoo uu goor dambe oo diinta iyo sida, baaxadda file yar oo ka dhigaysa in ay dhan u qalantaa.
Related links 1. VPN Server for Shiinaha
2. Dhammaan saabsan AVCHD 1. AVCHD VS MP4: Waxa Ayidaya iyo Diidaya AVCHD badan MP4 ee Tayada iyo File Size
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo AVCHD?
MP4 iyo AVCHD jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 iyo AVCHD isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo AVCHD video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama AVCHD inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya file MP4 ama AVCHD in aad rabto in aad kala soo bixi ka. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli kartaa ugu fiican MP4 tayada iyo AVCHD files.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 in la AVCHD adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "AVCHD".
Talaabada 5 Play faylka AVCHD bixi
> Resource > MP4 > AVCHD vs MP4, Faraqa u dhexeeya AVCHD iyo MP4